VLC waa ciyaaryahanka ugu fiican warbaahinta laga heli karaa dhamaan dhufto ee ay ilaa iyo haatan. Waa il software furan, oo laga heli karo sida a free download. Software wuxuu taageeraa dhamaan qaab maqal iyo muuqaal, by hadda in ka badan ciyaaryahan kasta warbaahinta kale. Mar kasta oo ku dhiirigelinayaan in ay fadhiisan in ay ka shaqeeyaan version cusub, waxay soo korayaan la ciyaaryahan ka sii xoog badan. Halkan waxa ku jira shan qeybood oo ugu danbeeyay soo gudbiyay VLC u Mac iyo daaqadaha.
Qeybta 1: VLC 2.2.1- Terry Pratchett
Qeybta 2: VLC 2.2.0- WeatherWax
Qeybta 3: VLC 2.1.5- RinceWind
Qeybta 4: VLC 2.1.3- RinceWind
Qeybta 5: VLC 2.1.2- RinceWind
Qeybta 6: Dhamaan versions of VLC media player
Version tanina waa nooc ka mid ah 2.2.0 soo hagaagtay. Waxa wuxuu diyaariyaa dhowr arrimood oo shil, arrinta codec, regressions oo badan oo kale. Waxa kale oo ay dib u bilaabi lahaa arrimaha u HD codec sida MP4 , MKV badan network oo aan la xalin ee version this. Oo weliba ammaanka, aad uga fiican yahay. Sameeysa ayaa isku dayay in uu ka sii mid deggan by horumarinta ee ay ka horreeyay.
Waxaad kala soo bixi kartaa links oo caan ah sida www.videolan.org , download.cnet.com , iyo softonic.com u Mac iyo daaqadaha labadaba.
Version Tani waa nooca ugu fiican ee la heli karo iyo mid ugu dambeeyay. Highlight ee version waa in ay kuu ogolaanayaa inaad si ay u sii midig ka meesha aad ka tagtay. Waxaa soo hagaagtay taageero u codes cusub HD, Opus, VP9 iyo H.265 / HEVC. Videos soo qaatay telefoonada waxaa si toos ah wareejiyo si looga fogaado taagan video syndrome. Intaa waxaa dheer, Sub VL lagala soo bixi karaa gudahood codsiga.
download ka links sida www.videolan.org , download.cnet.com iyo softonic.com u Mac OS iyo daaqadaha labadaba.
Muuqaaladan weyn ee version waxaa ka mid ah arrimaha kelmadaha go'an on MP3 , MKV iyo kelmadaha hardware. Xaaladdan Mac OS waxa ay leedahay qabashada QTsound fiican iyo amar channel audio. Wixii ammaanka, waxa uu updated libpng iyo maktabadaha GnuTLS. Waxay leedahay audio iyo video saarka cusub ee OS iyo daaqadaha labadaba. Waa 4K diyaar iyo qaabab kale warbaahinta cusub.
Waxaad software ka soo dejisan kartaa www.videolan.org , cnet.com iyo softonic.com. Waxa ay yihiin ilaha ugu kalsoonaan karo.
Version Tani waxay la soo bandhigay la gartaan qalabka hagaajinta cusub, kuwaas oo loogu talagalay qaabab cusub HEVC iyo VP9. Waxaa jira kelmadaha hardware u OS X isticmaalaya VDADecoder. Waayo, daaqadaha iyo Mac, audio iyo video maamulka wax soo saarka la wanaajiyo.
ilo Popular download waxaa ka mid ah www.videolan.org , softonic.com , iyo cnet.com
Iyada oo ku xidhan madal, version tani waxay u oggolaanaysaa kelmadaha tijaabo ah HEVC iyo Webm. Waxaad SPDIF aad u fiican iyo Audio maamulka qalabka labada Windows iyo Mac. Waxay leedahay fiican daaqadaha rakibayo iyo updates turjumaadaha.
download The xidha waxaad isticmaali kartaa waa www.videolan.com iyo download.cnet.com.
6. Dhammaan versions of VLC media player
Dhammaan versions of VLC ciyaaryahan warbaahinta ayaa diyaar u ah Windows iyo Mac. Halkan waxa aad ku arki deg deg ah ee qoraalkii ka.
Cusboonaysiiso Just aad VLC ciyaaryahan si version ugu danbeeyay ee ay la kulmaan wax cusub.
> Resource > VLC > dajinta Latest Version of VLC